အမြိုးသမီးတိုငျး သိထားရမယျ့ မိနျးမကိုယျကနျြးမာရေး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
1. မိနျးမကိုယျကို အမွဲခွောကျသှအေ့ောငျထားပါ။ ခညျြသားအတှငျးခံမြားကိုသာ ဝတျဆငျပါ။ ပှပှခြောငျခြောငျဘောငျးဘီမြားကိုသာ ဝတျဆငျသငျ့ပါတယျ။
2. မိနျးမကိုယျတဈဝိုကျကို ဆေးကွောတဲ့အခါ မိနျးမကိုယျသနျ့စငျဆေးရညျနဲ့ ဆေးကွောပေးသငျ့ပါတယျ။ ဆေးပွီးတိုငျးမှာလညျး မိနျးမကိုယျကို ခွောကျသှအေ့ောငျ သုတျပေးပါ။
3. မှေးလမျးကွောငျးအတှငျးထဲ (သို့) မိနျးမကိုယျအတှငျးထဲထိ ဆပျပွာပွငျးပွငျးမြားကို အသုံးပွုပွီး ဆေးကွောခွငျး မပွုလုပျသငျ့ပါ။ ဒီလိုပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ မိနျးမကိုယျရှိ သဘာဝ pH ကို ပကျြပွားစတေဲ့အပွငျ ပိုးဝငျခွငျးဖွဈစဖေို့ ပိုအားပေးပါတယျ။
4. မိနျးမကိုယျကို ဆေးကွောတာမြိုး၊ တဈရှူးနဲ့ သုတျတာမြိုး ပွုလုပျတဲ့အခါ မိနျးမကိုယျကနေ စအိုဘကျကို သုတျပေးမှသာ မိနျးမကိုယျတှငျးသို့ ပိုးဝငျခွငျးကို ကာကှယျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
>> မိနျးမကိုယျကို ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာတှသေိထားဖို့လိုသေးလဲ?
● မိနျးမကိုယျကနျြးမာစဖေို့အတှကျ အကြိူးပွုဘကျတီးရီးယားမြားစှာက ကူညီပေးပါတယျ။ ကောငျးကြိူးပွုဘကျတီးရီးယားတှဆေိုတာက မိနျးမကိုယျကို အကျဆဈဓာတျ ပိုမိုရရှိအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ဒီလိုအကျဆဈဓာတျရှိခွငျးက ဆိုးကြိုးဖွဈစတေဲ့ ဘတျတီးရီးယားတှေ ပေါကျဖှားခွငျးကို ကာကှယျပေးထားပါတယျ။
● ဒီလို ကောငျးကြိူးပွုဘကျတီးရီးယားတှကေို နညျးပါးစပွေီး မိနျးမကိုယျရှိ pH ကို ပကျြပွားစတေဲ့အရာတှကေတော့ ပိုးသတျဆေးမြားသောကျခွငျး၊ မိနျးမကိုယျအတှငျးထဲထိ ဆပျပွာအပွငျးမြားဖွငျ့ ဆေးကွောခွငျး၊ ကပျြသောအတှငျးခံနဲ့ ဘောငျးဘီမြားဝတျခွငျး၊ မိနျးမကိုယျအတှငျးသို့ ခြောဆီမြား၊ ခရငျမျမြားထညျ့ခွငျးနဲ့ ကိုယျဝနျရှိခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
● မိနျးမကိုယျရှိ pH မြှခွမေမှနျခွငျးကို ပွသနတေဲ့ လက်ခဏာကတော့ မိနျးမကိုယျမှ အဖွူဆငျးခွငျးနဲ့ အနံ့ဆိုးသော အရညျမြားဆငျးခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။ တဈခါတလမှော မီးခိုးရောငျ၊ အစိမျးရောငျနဲ့ အဖွူရောငျပဈြပဈြမြားလညျး ဆငျးတတျပါတယျ။
● ဒါ့အပွငျ မိနျးမကိုယျဖောငျးခွငျး၊ ကာလရှညျ အလှနျအမငျးယားယံခွငျး၊ ပူခွငျးမြားရှိပါက မိနျးမကိုယျရောငျရမျးနတောဖွဈလို့ ဆေးကုသမှုခံယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။
● မိနျးမကိုယျရောငျရမျးခွငျးဟာ လိငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျသောရောဂါမြားကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပွီး မှိုစှဲခွငျးနဲ့ ဘကျတီးရီးယားပိုးဝငျခွငျးမြားကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
● လိငျကတဈဆငျ့ ကူးစကျသောရောဂါမြားအတှကျ အမွနျဆုံးကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါတယျ။ မဟုတျရငျ ဆိုးကြိုးမြားဖွဈစပွေီး ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှဆေိုပါက ကလေးစောမှေးခွငျး၊ ပေါငျမပွညျ့သောကလေးမြား မှေးခွငျးတို့ကို ဖွဈစပေါတယျ။
အမျိုးသမီးများအတွက် မိန်းမကိုယ်ဟာ အထူးဂရုပြုရမယ့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားခြင်းဖြင့် မိန်းမကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။
>> ဆောင်ရန် / ရှောင်ရန်များ
1. မိန်းမကိုယ်ကို အမြဲခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ ချည်သားအတွင်းခံများကိုသာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ပွပွချောင်ချောင်ဘောင်းဘီများကိုသာ ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
2. မိန်းမကိုယ်တစ်ဝိုက်ကို ဆေးကြောတဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးကြောပေးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပြီးတိုင်းမှာလည်း မိန်းမကိုယ်ကို ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပေးပါ။
3. မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်းထဲ (သို့) မိန်းမကိုယ်အတွင်းထဲထိ ဆပ်ပြာပြင်းပြင်းများကို အသုံးပြုပြီး ဆေးကြောခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိန်းမကိုယ်ရှိ သဘာဝ pH ကို ပျက်ပြားစေတဲ့အပြင် ပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်စေဖို့ ပိုအားပေးပါတယ်။
4. မိန်းမကိုယ်ကို ဆေးကြောတာမျိုး၊ တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်တာမျိုး ပြုလုပ်တဲ့အခါ မိန်းမကိုယ်ကနေ စအိုဘက်ကို သုတ်ပေးမှသာ မိန်းမကိုယ်တွင်းသို့ ပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
>> မိန်းမကိုယ်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေသိထားဖို့လိုသေးလဲ?
● မိန်းမကိုယ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အကျိူးပြုဘက်တီးရီးယားများစွာက ကူညီပေးပါတယ်။ ကောင်းကျိူးပြုဘက်တီးရီးယားတွေဆိုတာက မိန်းမကိုယ်ကို အက်ဆစ်ဓာတ် ပိုမိုရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုအက်ဆစ်ဓာတ်ရှိခြင်းက ဆိုးကျိုးဖြစ်စေတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
● ဒီလို ကောင်းကျိူးပြုဘက်တီးရီးယားတွေကို နည်းပါးစေပြီး မိန်းမကိုယ်ရှိ pH ကို ပျက်ပြားစေတဲ့အရာတွေကတော့ ပိုးသတ်ဆေးများသောက်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်အတွင်းထဲထိ ဆပ်ပြာအပြင်းများဖြင့် ဆေးကြောခြင်း၊ ကျပ်သောအတွင်းခံနဲ့ ဘောင်းဘီများဝတ်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်အတွင်းသို့ ချောဆီများ၊ ခရင်မ်များထည့်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
● မိန်းမကိုယ်ရှိ pH မျှခြေမမှန်ခြင်းကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာကတော့ မိန်းမကိုယ်မှ အဖြူဆင်းခြင်းနဲ့ အနံ့ဆိုးသော အရည်များဆင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ မီးခိုးရောင်၊ အစိမ်းရောင်နဲ့ အဖြူရောင်ပျစ်ပျစ်များလည်း ဆင်းတတ်ပါတယ်။
● ဒါ့အပြင် မိန်းမကိုယ်ဖောင်းခြင်း၊ ကာလရှည် အလွန်အမင်းယားယံခြင်း၊ ပူခြင်းများရှိပါက မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းနေတာဖြစ်လို့ ဆေးကုသမှုခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
● မိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး မှိုစွဲခြင်းနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
● လိင်ကတစ်ဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများအတွက် အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူဖို့ လိုပါတယ်။ မဟုတ်ရင် ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆိုပါက ကလေးစောမွေးခြင်း၊ ပေါင်မပြည့်သောကလေးများ မွေးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။